१०६ वर्षीय बाको मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया – Janata Times
भरतपुर आँखा अस्पतालको बहिरङ्ग सेवामा आज बिहान भेटिनुभएका एक वृद्ध निकै खुशी देखिनुहुन्थ्यो । एक सय छ वर्षको उमेरमा एक साताअघि आफ्नो देब्रे आँखाको मोतियाविन्दुको शल्यक्रियापछि आँखा देखेसँगै उहाँमा खुशी थपिएको हो । भरतपुर महानगरपालिका–२ क्षेत्रपुर निवासी पुननारायण श्रेष्ठको यो उमेरमा सफल शल्यक्रिया भएपछि उहाँ निकै खुशी हुनुभएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंले लगाएको जकेट कालो रहेछ, पर बसेकाहरुलाई पनि देखेको छु ।” एक वर्षअघिदेखि धमिलो हुँदै गएको आँखाले पछिल्लो समय देख्न छाडेपछि उहाँ चिन्तित हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई आँखाको शल्यक्रिया गर्न नजिकै घर भएकी भरतपुर आँखा अस्पतालमा कार्यरत छायाँ श्रेष्ठले सुझाव दिनुभयो । त्यतिमात्रै होइन, छायाँले अस्पतालका डा. मारिया गौतमसँग परामर्श गरेर शल्यक्रियाको प्रबन्ध पनि मिलाइदिनुभयो ।
सफल शल्यक्रियापछि निकै उत्साहित हुँदै वृद्ध श्रेष्ठले आफूले जीवनमा पुनः आँखा देख्ने अवसर पाएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उपचार गरे हुँदोरहेछ ।” उहाँसँगै रहनुभएका जेठा छोरा नारद श्रेष्ठले डोराएर हिँड्नुपर्ने बुबा आफैं हिँड्न थालेपछि निकै खुशी हुनुभएको बताउनुभयो । अस्पतालका चिकित्सक डा. गौतमले वृद्धहरुको शल्यक्रिया कठिन हुने भए पनि बिरामीले चाहेमा सफल शल्यक्रिया गर्न सकिने बताउनुभयो ।
आफ्नो जीवनमा यति धेरै उमेरका व्यक्तिको शल्यक्रिया गरेको भने पहिलो भएको उहाँले बताउनुभयो । उपचारमा उमेरले नछेक्ने भएकाले आत्मबल उच्च गरेर उपचार गर्न आउन गौतमले आग्रह गर्नुभयो । भरतपुर आँखा अस्पतालले गत आर्थिक वर्षमा आठ जिल्लाका एक लाख ७१ हजार ४०० को आँखाको उपचार गरेको थियो । अस्पतालले विभिन्न जिल्लामा शिविर सञ्चालन र अस्पताल एवं आँखा उपचार केन्द्रमार्फत बिरामीको उपचार गर्दै आएको छ ।
Related tags : एक सय छ वर्षीयको मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया
वामदेव गौतमलाई प्रदीप नेपालको कठोर प्रश्न